Angina kwenzeka ngesikhathi syphilitic ugcunsula yesibili , futhi iqoqo izinqubo ukuvuvukala kule izitho oropharynx. Ngokuvamile uhlushwa idlala. Ake sihlole kabanzi lokho syphilitic obukhulu emphinjeni, izimpawu kanye nezinhlobo sifo, kanye izindlela ngokwelashwa nokuvimbela.
Izinhlobo angina syphilitic
Zintathu izinhlobo zesifo:
Papular angina syphilitic. Yena ephelezelwa ukubukeka papules olimini, emphinjeni kanye ulwelwesi lwamafinyila of amalaka.
Pustular syphilitic isilonda-umphimbo obuhlungu. Phakathi nalesi sifo le mucosa we pharynx kwakhiwa pustules. Ngemva kwalokho pitting yabo kwenzeka.
Syphilitic angina erythematous. Lolu hlobo isifo kuhambisana edema mucosal kanye Imininingwane hyperemia.
Izimbangela angina syphilitic
Njengoba Ekuqaleni kuphawuliwe ngenhla, angina syphilitic kuyingxenye ugcunsula yesibili. Ngakho musa ukwenza umzamo omkhulu ukuze baqonde lokho kungaba izindlela ukutheleleka.
Okokuqala, ugcunsula angadluliselwa kwezocansi ngegazi contact. Nakuba ukutheleleka kungenzeka uma usebenzisa okungokwakhe lesiguli siqu.
Okwesibili, imbangela isifo kungenziwa kwehlisa amasosha omzimba. lososayensi kwase isifundo eyabonisa Imiphumela ethakazelisa kakhulu. It kuvela ukuthi abantu abanesimiso somzimba sokuzivikela esiqinile cishe ngeke itheleleke nge ugcunsula kunoma yiluphi uhlobo lokuxhumana imayelana 25 amaphesenti.
Njengoba izibalo zibonisa, angina syphilitic ivela kaningi kakhulu emva kocansi ngomlomo.
angina Syphilitic: izimpawu
Lokhu kuhlangana kanjani isifo? Ekuqaleni, iziguli ngisho nokuwabona ukuthi banayo angina syphilitic. Isikhathi bayashintshana ekufukameleni lesi sifo kungase kube kufika ku ngenyanga eyodwa, futhi kuphela ngemva kwalesi sikhathi, amalaka seziqala othi awube ne kancane anda ubukhulu. Kuze kube kuleli qophelo lo zokugula kungaba iphutha for umkhuhlane.
Uma ukutheleleka kwenzeka ngokusebenzisa ubuhlobo bobulili temlomo, omunye amalaka kwenzeka syphilophyma, ngenkathi sebeqala ukubona umphumela izinqubo ukuvuvukala.
Ngemva kwalokho okwandisa usayizi lymph node kuthabathela ecaleni ethintekile. Kuyinto kulesigaba izimpawu isifo ebonakalayo kakhulu futhi ezingokoqobo. Uma ngesikhathi esedlule, eyathatha isikhathi esingangenyanga, isiguli kungaphazamisa kuphela umphimbo okuncane obuhlungu, namathansela syphilitic manje isiqala athole umfutho. Kukhona ubuhlungu obukhulu emphinjeni , ngesikhathi nokugwinya hhayi kuphela, kodwa futhi lapho esephumule, ku amalaka yakha izilonda ezincane, kukhuphuke izinga lokushisa komzimba.
Kuleli qophelo ngesikhathi kubalulekile ukuya emtholampilo ukuxilongwa kanye nokwelashwa ezifanele aphoyintimenti njengoba angina syphilitic kungabangela eziningi zempilo futhi abangele izifo eziningi umzimba wonke.
Ukuxilongwa ugcunsula umphimbo obuhlungu
Udokotela wokuqala ukuqhuba ukuhlola isiguli. Ingcweti onekhono ngempela uzoyilalela ulwelwesi lwamafinyila, okuyinto aluthola tint bluish. Ngaphezu kwalokho, akunakwenzeka ukuba uphawule ukubukeka izilonda nezinye izinguquko amalaka.
Ngaphezu kwalokho kwenziwe ukuhlolwa laboratory eziningana ukuthi angakusiza ukuhlonza igciwane, pathogen futhi ukusungula uphethwe esichazayo. Lezi zihlanganisa ukuhlaziywa smear ebusweni amalaka kanye lymph node we wokubhoboza. Ngaphezu kwalokho, impoqo ukubalwa kwezimali Wasserman.
Ukwelashwa nokuvikelwa ugcunsula umphimbo obuhlungu
Indlela ukuqeda isifo esinjengo syphilitic angina? Ukwelashwa kuhilela yokwelapha eziyinkimbinkimbi. It izobandakanya nokuqedwa ugcunsula uqobo kanye nezinkinga emvume.
Ngempela wabele reception kwamaphilisi ezimbili ezihlukene emaqenjini isenzo ( "penicillin", "Augmentin", "Amoxiclav" futhi "clarithromycin" noma "Azithromycin"). Ukwelashwa ngosizo lwabo akwazi ukuxoxa ngenyanga eyodwa, futhi uma izinkomba ekhethekile, kungase enwetshiwe kuze yokutakula. Ngakho ngesikhathi yokwelapha isikhathi eside ngokwengeziwe ukwamukela ejenti letiphakanyisiwe antifungal, isibonelo "nystatin" noma "i-fluconazole".
Ukuqeda into ezifana syphilitic umphimbo obuhlungu, ukuhahaza nezixazululo isinqandakuvunda olwenziwa emphinjeni. Izidakamizwa enamandla kakhulu kukhona kule plan "Chlorhexidine" futhi "Miramistin". Kuye ubunjalo ukuvuvukala inqubo ukugeleza ukuhahaza kudingeka mayelana 5 izikhathi ngosuku. Kulokhu kanyekanye ne ukuqeda izimpawu angina kwenzeka nqgo bangangenwa yilesi sifo wendawo, ekhuthaza ukuphulukiswa okusheshayo ulwelwesi lwamafinyila iphinde ivimbele nezibazi.
I izixazululo ezichazwe ngenhla ngoba gargling ingaphinda ungeze soda, iodine, Thyme, chamomile, zikagamthilini, nokunye. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuba ukuqhuba ephefumula nge izitshalo zokwelapha.
Mayelana nokulahla nezinye izimpawu ezingemnandi kudinga yokwamukela ama-NSAID ukuqeda izimpawu ubuhlungu futhi sinciphise izinga lokushisa. Uma uneminye yezinkinga kokuba ukwelashwa lingaze.
Indlela uzivikele enkingeni ezifana angina syphilitic?
Kukhona ukuthatha izinyathelo ezimbalwa ezilula zokuvimbela:
ukugcinwa kwemithetho kwenhlanzeko obuseduze siqu;
zokuchithwa ubudlelwano abayitoho ngokocansi noma ukusetshenziswa kwamakhondomu;
ocansini abalingani ezingajwayelekile kuphela ikhondomu;
uma izinsolo - odlulayo ihlolwe venereologist.
Zinakekele futhi uhlale unempilo!
Salpingo - yisishiso amaqanda ezihlobene
Ukulungiswa - iyona legatsha main